Date My Pet » Chii Twitter vanogona kukudzidzisa About Love?
mazuva aya, pasocial network magazines, Zvichida nzvimbo vanhu vanopedza nguva yavo kana vakasununguka.
Nepo Ichokwadi kuti kazhinji nguva yakawandisa evanhu vezvenhau anozova kusingabatsiri vose kusina musoro chitchats uye makuhwa, dzimwe nguva vanhu vanoguma kudzidza yakawanda inonakidza uye zvinokosha zvinhu Websites izvi. Semuyenzaniso, pane pasocial network mapeji kuti kupa Quick itsva dzaungagona, mapeji kuti ridzidzise vanhu vanenge mufashoni yokurera, zvichingoenda zvakadaro.
Zvadaro, pane zvimwe zvidzidzo munhu anogona kudzidza chete nokuva dzose achiputa social network; pazasi vamwe rudo zvidzidzo Micro-Blogging nzvimbo Twitter anodzidzisa.
1. Rudo harusi chete pamusoro kugara pamwe chete:
Uyu ndomumwe chidzidzo Miley Koreshi akatipa kubudikidza Twitter panguva yake kurambana nevakomana Justin Gaston muna February, 2011. Kuzivisa marambana pamusoro Micro-Blogging nzvimbo, Koreshi akati kuti rudo rwechokwadi haagoni kuva nemagumo anofadza sezvo rudo rwechokwadi kumbobvira rinoguma.
Aimbova nyeredzi wepaterevhizheni Hanna Montana akawedzera kuti kubvisa ndeimwe nzira yokuratidza rudo. Ichi guru rudo chidzidzo vose, kana muduku.
Kana uchida mumwe munhu, unofanira kuziva sei kumuregedza / aende. Kana munhu asingadi kuramba kukuda kana nemi, unofanira hatitombodi ave / her izvozvo anokomekedza; izvi nokuti kana imi muchida kuti munhu, zvirokwazvo kuda kumuona / her anofara.
2. Pane zvimwe zvinhu haufaniri kutaura kana kupedza nguva naye mudiwa wako:
Recently paiva hashi chipepa trending musi Twitter chakabatsira vanhu kuunganidza ruzivo nezvezvinhu hakufaniri akati musi. The hashi Tag inodai: #FiveWordsToRuinADate.
Users Hamubvumirwi vanoverengeka mazano pamusoro mashoko anogona kukanganisa musi. Vamwe mazano iwayo here kuyeuka.
Semuyenzaniso, Matt Lieberman, Ndianiko wehondo AfterBuzz TV, akanyora kuti maererano naye mashoko mashanu kuti anogona kukanganisa musi tiri “iwe wokutsvoda kufanana munin'ina wangu”. Chii Lieberman aida kutaura zvakanga zviri chikanganiso chikuru kutaura kwako kare ukama pamberi yenyu itsva rudo.
Mumwe muenzaniso ndiyo Tweet kubudikidza Jeff Drake, munyori. The shanu Mashoko wakarambidzwa, maererano naye, ndivo “amai vangu chingatibatsira kutyaira”. Mashoko aya anogona kuva spoilsport guru kana pakabudisa kana kupedza nguva naye mudiwa wako, kunyanya kana uri mukomana.
Ehe, iwe zvirokwazvo kodzero kuda amai vako, asi vasikana vakawanda vanovenga kuona murume muupenyu hwavo kuunza bhuku amai vavo kana kunyange kutaura zvakawanda pamusoro wake.
Kupinda hashi Tag #FiveWordsToRuinADate pamusoro Twitter kutsvaka pakapuranga; uchawana kuona kunakidza uye anobatsira mazano mazhinji akadai.
3. Little zvinhu zvinogona kuita zvinoshamisa:
Rudo nezvezvinhu shoma; Kanenge kukurukura Twitter anoratidza saka. Semuyenzaniso, munhu Tweet kubudikidza Patama Posts kunoratidza kuti vasikana vanoda zvakaitika Vakambundirana kubva shure.
Zvinhu zviduku izvozvo zvinogona kuita kuti mumwe wako aone kuti anodiwa uye Twitter anodzidzisa vakawanda vavo.